घर » Beachbody » 55% बन्द शरीर जनावर! केवल सीमित समयका लागि $ 39.90 मात्र
2016 शरीर जनावर बिक्री
55% को शरीर जनावर कसरत प्रणाली बन्द!
एक सीमित समयको लागी, तपाईं Beachbody's Body Beast कसरत कार्यक्रममा 55% बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यस शारीरिक जनावर बिक्रीको साथ, तपाईं केवल $ 39.90 प्लस ढुवानी र पूर्ण डीभिडी कसरत कार्यक्रमको लागि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। शरीरको बीउ सामान्यतया $ 89.95 को लागि चलाउँछ
शरीरको पशु के हो?
शरीरको बीउ पहिलो सब-संवेदित कसरत, प्रदर्शन आहार, र पूरक प्रणाली मध्ये एक हो। यसले 12 डीभिडीमा4गतिशील सेट प्रशिक्षण कार्यसमावेश गर्दछ।
यो तपाईंको लागि ठूलो, मांसपेशी शरीर निर्माण गर्न को लागी सिर्जना गरिएको थियो। जब सही ढंगले प्रयोग गरिन्छ, शरीर जनावरले 10 दिनको रूपमा लिने पेशाको 90 lbs थप्न सक्षम छ। शरीरको बीउ गतिशील सेट प्रशिक्षणको अवधारणामा आधारित छ।
गतिशील सेट प्रशिक्षण सेट र प्रतिनिधि को एक विशिष्ट अनुक्रम हो जुन मांसपेशियों को तनाव संग मांसपेशियों को समाप्त र "भर्ती" अधिक मांसपेशियों फाइबर को लक्ष्य संग अधिकतम। गतिशील सेट प्रशिक्षणले तपाईंको शरीरको टेस्टोस्टेरोन उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों को मास को विकास को लागि जिम्मेदार मुख्य हार्मोन हो, यसैले तपाईंको टेस्टोस्टेरोन तपाईंको शरीर बनािन्छ, चाँडै यो बढ्नेछ।
यस 55% मा शारीरिक जनावर बिक्रीमा थप जानकारीको लागि तल ब्यानर क्लिक गर्नुहोस्
* यो 55% को शरीर जनावर बिक्री3/7/ 16 12 को अनुसार मान्य छ: 00 AM EST। उत्पादन मूल्यहरू र उपलब्धता संकेतित मिति / समय अनुसार र सही विषयको रूपमा हो। खरीदको समयमा Beachbody मा प्रदर्शित कुनै पनि मूल्य र उपलब्धता जानकारी शारीरिक बीट कसरत कार्यक्रमको खरीदमा लागू हुनेछ।
मार्च 7, 2016 FitnessRebates Beachbody कुनै टिप्पणी छैन